Firy ny backlinks mila mila manatsara ny toerana misy anao?
Raha jerena amin'ny fomba fijery optimisma, ny dingana famoronana rohy dia manangana tranonkala hafa avy amin'ny loharanom-baovao hafa ho an'ny anao amin'ny alàlan'ny fomba fifandraisana hafa mifandraika amin'ny fandefasana bilaogy, fanakianana an-tserasera, famoahana gazety ary sns.Ireo hetsika rehetra ireo dia manolotra ny fahamarinanao amin'ny marika ary manangana ny lazanao eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny fitaovam-pikarohana dia mihevitra ny rohy izay manondro ny toerana misy anao ho toy ny fifidianana nomerika sy ny habetsahan'ny vato azonao, ny habetsaky ny tranokalanao dia eo amin'ny SERP.
Na izany aza, raha ny marina dia tsy mitovy ny vato rehetra - bermain togel online. Be dia be ny teknikam-pitsikilovana izay manaparitaka ny karoka fitadiavam-bola ary mahazo avo lenta kokoa amin'ny votoatiny mbola ambany. Na izany aza, dia tsy misy intsony ny fotoana, rehefa afaka manangana rohy ambany amin'ny kalitaon-tsarimihetsika manodidina anao ianao. Amin'izao fotoana izao dia mikely aina amin'ny hetsika fananganana rindran-damosin'i Google toy ny fambolena rohy, ny lahatsoratra ary ny tsikera momba ny bilaogy spammy ny Google sy ny vondrona matihanina lehibe hafa.Vao haingana, Google dia nametraka ny algorithm vaovao voatanisa araka ny tokony hamafana ireo rindranasa madinika rehetra. Raha tsy izany, loharanom-baovao iray dia mety ho voasakan'ny Google, na hahazo sazy izay mitarika mankany amin'ny fialan-tsasatra. Izany no mahatonga, amin'izao fotoana izao, ny kalitaon'ny rohy ety ivelany dia ankasitrahana kokoa noho ny habeny. Midika izany fa mila manamarina ny fahefana sy ny maha-zava-dehibe ny loharano izay mametraka rohy mankany aminao.
Raha ny mikasika ny PageRank ho an'ny loharanon-tranonkalanareo, dia voafaritra amin'ny fametrahana rohy mankany amin'ny tranokalanao. Midika izany fa raha toa ianao ka mifandray amin'ny tranonkala miaraka amin'ny PR PR, dia tsy hitombo ny PageRank anao.
Izany no mahatonga ny tranokala avo lenta amin'ny tranonkala avo lenta avoakan'ny avoavo kokoa noho ny an'arivony tsy dia tsara loatra. Ny rohy ambany kokoa ampiasain'ny mpikarakara SEO tsy ara-profesialy, azo avy amin'ny hetsika fananganana rindran-trano, dia tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny tranonkala SEO ihany, fa manimba ny sarinao sy ny lazanao.
Backlinks azo antoka avy amin'ny tranokalan'ny niche miaraka amin'ny PageRank avo dia hahatonga ny raharaham-barotra ho azonao kokoa ary hanampy ireo fitaovam-pikarohana mba hamaritana ny toerana misy anao.
Firy ny rindran-damina mila sokajinao ambony amin'ny Google?
Tsy misy teboka hametrahana ity fanontaniana ity satria ny valiny dia miankina amin'ny indostria sy ny marika. Ny sehatra iray dia mila bakety ambony avo lenta ihany no ahafahana mametraka ny pejy avo lenta, raha toa kosa ny sehatra hafa mila rohy maromaro mba hampiakarana ny fahefany ary hanatsara ny lazany. Mazava ho azy, misy marika maromaro hafa izay manome anjara amin'ny toerana misy ny tranonkala amin'ny valin'ny fikarohana.
Inona avy ireo backlinks tsara indrindra?
Ny karazana backlinks tsara indrindra dia rohy ivelany avy any ivelany. Tonga any amin'ny tranokalanao izy ireo raha tsy mangataka anao ary mahazo fotoana tsy ampoizinao. Ireo rohy azon'ireo blôgy malaza sy malaza izay manombana tsara ny votoatinao ary manapa-kevitra ny hizara azy amin'ny mpamaky. Raha ny fitsipika, ireo karazana backlinks dia azo avy amin'ny loharanom-baovao mahazatra ary mitondra fifamoivoizana amin'ny tranonkala mifandraika amin'izany.
Na izany aza, sarotra ny mahazo rohy ara-organika avy amin'ny vohikala azo itokisana ao amin'ny tsenanao. Ny loharanon'ny tranonkala dia tokony hanana safidy be ho an'ny mpampiasa ary manana laza tsara mba hahazoana làlana ahafahana mahazo rohy vaovao avy amin'ireo mpitarika indostria.